Iyo nyowani vhezheni yeIceCat 60.7.0 webhu bhurawuza inosvika uye idzi ndidzo nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeIceCat 60.7.0 webhu bhurawuza inosvika uye idzi ndidzo nhau dzayo
Iyo GNU chirongwa ichangobva kuzivisa kuunzwa kwe vhezheni itsva yewebhu browser IceCat 60.7.0. Kutanga yakavakirwa paFirefox 60 ESR kodhi, yakagadziridzwa zvinoenderana nezvinodiwa zvemahara zvachose software.
Kunyanya zvisiri-zvemahara zvikamu zvabviswa, dhizaini zvinhu zvakatsiviwa, Iko kushandiswa kwezvikwangwani kwakamiswa, kutsvaga kwekuwedzera uye kusingabhadharwe kwekuwedzera kwakadzimwa, uyezve, zvinowedzerwa zvakaverengerwa kuvandudza zvakavanzika.
Zvakare HTML5 Vhidhiyo Kwese Kwese kutsiva Flash player neanalogog yakatarisana netepi yevhidhiyo uye nekushandisa yakavanzika maitiro ekuti kurodha pasi zviwanikwa kunongobvumidzwa kubva kune ino saiti.
Nokusingaperi, iyo HTTP DoNotTrack musoro unogarwa uye iyo HTTP Referrer musoro unogara uchipfuudza zita remuenzi uko chikumbiro chakanangiswa.
Aya anotevera maficha akaremara: chengetedzo cheki kuvhura masayiti muGoogle masevhisi, Encrypted Media Extensions (EME), Telemetry Unganidzo, Flash rutsigiro, Tsvagiridzo, nzvimbo yeAPI, GeckoMediaPlugins (GMP) uye cheki ye plugin ine masiginecha edhijitari. WebRTC inogadziriswa kuvhara mukati IP kudonha kana uchishanda kuburikidza neTor.
1 Main nyowani maficha eGNU IceCat 60.7.0
2 Maitiro ekuisa IceCat paLinux?
Main nyowani maficha eGNU IceCat 60.7.0
Kune rimwe divi tinogona kuwana izvo zvakavanzika zvine chekuita nekuvanzika zvakagadziridzwa mukuburitswa kutsva kweIceCat 60.7.0. Sezvo nekukanganisa, zvinotevera sarudzo dzakabatanidzwa: chinja iyo Referer musoro, sarudza zvikumbiro mukati mehukuru domaini, uye vharira kutumirwa kweMusoro musoro.
kunze kwaizvozvo LibreJS plugin yakagadziridzwa kune vhezheni 7.19rc3 (tsigiro yeiyo Android chikuva yaonekwa), pamwe neTorButton inosvika vhezheni 2.1 (noti inoratidza 0.1, asi pamwe itypo) uye HTTPS Kwese kwese kwakagadziridzwa kuita vhezheni 2019.1.31.
Zvakare GNU IceCat 60.7.0 inouya neyakagadziriswa Interface kuti ione zvakavanzika zveHTML mumapeji.
Chekupedzisira imwe poindi yekusimbisa ndeye kumisikidzwa kweyechitatu-bato rekukumbira blocker iyo yakagadziridzwa kubvumidza zvikumbiro kumatunhu eiyo inomiririra peji razvino, kune anozivikanwa zvinyorwa zvekutakura zvemukati, kumafaira eCSS uye kumaseva ane zviwanikwa zveYouTube.
Maitiro ekuisa IceCat paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa iyi webhu bhurawuza pane avo masystem, vanogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
Natively IceCat inowanikwa mune akawanda marekodhi ekuparadzirwa kwazvino kubva kuLinux, saka ivo vanongofanirwa kumirira kuti vakwanise kuisa iyi nyowani vhezhenisezvo zvinotora mazuva mashoma kugadzirisa mapakeji.
Muchiitiko cheArch Linux, iyo package yakatovandudzwa muAUR repository, saka kuiswa kwayo kunogona kuitwa nekuita unotevera kuraira:
yay -S icecat-bin
Chekupedzisira, kune avo vanoda kuisa bhurawuza kubva kune yayo kodhi kodhi, inogona kutorwa kubva chinotevera chinongedzo.
IceCat inomhanya yayo yega sevhisi sevhisi, inowanikwa zvachose mahara. Mazana ekuwedzera-ons anowanikwa kugadzira IceCat inobudirira yewebhu browser seFirefox. Zvakare, inotarisa zvakanyanya pane chengetedzo ichienzaniswa neFirefox. Unogona kutarisa ruzivo rwemahara mawedzero-avo pane yayo yepamutemo peji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni yeIceCat 60.7.0 webhu bhurawuza inosvika uye idzi ndidzo nhau dzayo
Chii chinonzi Fedora Silverblue. Pachine nzvimbo yezvakapihwa zvekutanga
Firefox yakaunza Lockwise yayo password yekushandisa application